(Sawirro) Uweys Axmed Sardheeye oo loo doortay Gudoomiyaha dallada dhalinyarada Puntland | puntlandi.com
(Sawirro) Uweys Axmed Sardheeye oo loo doortay Gudoomiyaha dallada dhalinyarada Puntland
Uweys Axmed Sardheeye ayaa Maantay loo doortay Gudoomiyaha Dalladda dhalinyarada Puntland ee PYAN kadib doorasho ka dhacday Magaalada Garoowe.
Doorashada waxaa soo qabanqaabisay Wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo Ciyaaraha Puntland oo kaashanaysa Hay,adda Care.
Wasiir kuxigeenka Wasaaradda shaqada shaqaalaha dhalinyarada iyo ciyaaraha Puntland,Ahaasimaha Wasaaradda Tigaana,agaasimaha dhalinyaradda Deeqo Jaamac Madax ka socotay Care iyo Marti sharaf ayaa goobjoog ka ahaa.
Xilka gudoomiyaha Dalladda dhalinyarada Puntland ayaa waxaa ku loo lamay Aweys Axmed Sardheeye iyo Farxaan Maxamed jaamac waxaana ku guulaystay Aweys Axmed Sardheeye oo helay 19 cod halka Farxaana uu helay 9 cod.
Sidookale Gudoomiye kuxigeenka Dalladda PYAN ayaa waxaa ku tartamay Liibaan Maxamed Xuseen iyo Kaltuun Muuse Cabdikariin waxaana ku guulaystay Liibaan Maxamed Xuseen oo helay 20 Cod halka Kaltuuna ay heshay 9 cod.
Kuxigeenka Madaxa Hay,adda Care ee Puntland Asli Axmed Maxamed ayaa hambalyo u dirtay Masuuliyiinta cusub ee la doortay iyadoona sheegtay inay markasta garab taagan yihiin.
Wasiir kuxigeenka Wasaaradda Shaqada Shaqaalaha Dhalinyarada iyo Ciyaaraha Puntland Cabdirisaaq Shire Ismaaciil iyo Agaasimaha Wasaaradda Axmed Cabdale Tigaana ayaa u kula dardaarmay Masuuliyiinta la doortay inay xilka loo igmaday si wanaagsan u gutaan.
Uweys Axmed Sardheeye ayaa horay u soo ahaa gudoomiyaha dalladda dhalinyaradda Puntland waxaana haatan uu xilka hayn doonaa mudo sadex sano ah.